benchmark Sims စွန်ငှက် BMS 4.33
benchmark Sims စွန်ငှက် BMS 4.333နှစ်ပေါင်း3months ago #412
ဒီ Falcon က F-16 Viper သငျသညျကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မယ် view ၏လက်တွေ့အချက်သည်သင်ထို့နောက်ပိုကောင်းမရနိုင်ပါ။
ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့ USAF ထံမှ Viper Falcon က F-16 ဂျော်ကီရဲ့ယာဉ်မောင်းထံမှ APPROAVED
အစစ်အမှန် Viper ကမ္ဘာကြီးထိုင်ခုံ။
လက်စွဲစာဖတ်ခြင်း၏ Alote ဒါအကြံပေးရမည် ,, အားလုံးကို system ရဲ့နားလည်ရန် BMS Viper သည့် F-16 ပျံသန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်!
ဒါကြောင့်အဘို့သင့်ကိုတက်အဲဒီမှာ Gentelmen သင်တက်တွေ့မြင် ,, လျှင်ဒီတော့ဒါက ,, အစစ်အမှန်အရာ ,, မယ့်ဂိမ်းတစ်ခုပါ!
စွန်ငှက်က F-16 Viper BMS 4.33
benchmark Sims ကြိုဆိုပါသည်
အသစ်က 4.33 features တွေအများအပြား featuring BMS 4.33 Trailer ။
စွန်ငှက် BMS 4.33U3 - 1.67 နာရီ (သင်ခန်းစာ) တွင်အသင့်ဖြစ်ပြီလားတိုက်ဖျက်ရေး Install
ဤဗီဒီယိုအားအားလုံးအားလုံး, ဒါပေမယ့်စွန်ငှက် BMS နှင့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုအများစုရှင်းပြအခြေခံကဗီဒီယိုဖြစ်နှင့်စွန်ငှက် BMS ပေါ်တွင်သင်၏ပထမဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘို့သင့်ကိုအဆင်သင့်ရအဆုံးဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းမပေးပါ။
စွန်ငှက် BMS 4.32 - 1 နာရီ (သင်ခန်းစာ) တွင်အသင့်ဖြစ်ပြီလားတိုက်ဖျက်ရေး Install
ဒါဟာသင်စွန်ငှက် BMS 4.32 နှင့်အတူစတင်ရန်သိရန်လိုအပ်သမျှသင်ပေးသင့်ကြောင်းအလွန်အစာရှောင်သောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလျင်မြန်စွာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်အပိုင်းကိုးကားရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါကကွဲပြားခြားနားတဲ့သင်ခန်းစာအပိုင်းအချိန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတံဆိပ်ထုဖြစ်ကြသည်။
benchmark Sims စွန်ငှက် BMS 4.333နှစ်ပေါင်း3months ago #420
အဆိုပါ Viper သည့် F-16 Falcon onboard ကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါအလိုဆန္ဒရှိသည်နှင့်သိကျွမ်း dont အသစ်အရာရှိများသင်တို့တွင်သူတို့အဘို့
သငျသညျစဉ်းစားရန်ငှားရမ်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မှာကိုက်ရန်အဘို့အဘယ်မှာဤနေရာတွင် ,, စတင်ရန်တစ်ခုခုပါပဲ။
လုံးဝ & အောင်မြင်မှုနောက်ပိုင်းမှာလည်းပြီ (Virtual) USAF တိုက်လေယာဉ်လေယာဉ်မှူးအရာရှိတဦးဖြစ်လာမယ့်ကမ်းလှမ်းမှုအဖြစ်ဤအခွင့်အလမ်းကိုယူ
၎င်းတို့၏ F-16 လေ့ကျင့်ရေးလူတန်းစား succesful ရလဒ်များကိုနှင့်အတူ & သင်ပေး & ယနေ့ Viper ပျံသန်းသောကြီးမြတ်ဆုံးသူတွေကိုအချို့နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခံရဖို့။
သင့်ရဲ့ခြောက် ,,, Gentelmen အပေါ်အဲဒီမှာသင်တက်ကြည့်ရှုပါ!
အဆိုပါစွန်ငှက် Lounge ဟာသင်တန်းအကယ်ဒမီကဘာလဲ?
ဤ "အကယ်ဒမီ" MaxWaldorf နှင့် Ripper ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: စွန်ငှက် BMS ၏အုပ်စုတစုရှိခြင်းပိုကောင်းသည့် F-16 နားလည်မှုရှာဖွေရေးအတွက်အသစ်အနေရဆဲနှင့်လေယာဉ်မှူးကိုကူညီလေယာဉ်မှူးကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါသင်တန်းပို့ချ F-16 (F16C Block ကို 50 သို့မဟုတ်အများအားဖြင့် 52) ကျွမ်းကျင်၌သင်တို့ကိုကူညီပေးနေသာရည်ရွယ်ချက်အပေါ်ရှိသည်။
သင်ကလေ့ကျင့်ရေးအချိန်ဇယားမတိုင်မီလေ့ကျင့် / သင်ခန်းစာများပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ် ...
ယခုတွင်သင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအပ်ပေးစေကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန်ငှက် BMS လေ့ကျင့်ရေး၏အခြေခံနားလည်ပါသည်။
စွန်ငှက် BMS သင်ယူခြင်းကြောင့်မစ်ရှင်အတွက်အောင်မြင်ဖို့အပျနှံတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ ကျောင်းသားကျောင်းအပ်မတိုင်မီလိုက်နာရမည်အချို့ Pre-လိုအပ်ချက်သိသာရှိပါတယ်:
ကျောင်းသားတစ်ဦး HOTAS + TrackIR (သို့မဟုတ်ညီမျှသည့်ကိရိယာ) ရှိရမည်
စွန်ငှက် BMS (နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်ဗားရှင်း) installed နှင့်အပြည့်အဝ Configure လုပ်ရမယ်
ဒီ website တွင်အကောင့်တစ်ခု Register
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများအဖွဲ့ကပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်သည်သင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သင်တန်းပို့ချ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ကများမှာကဲ့သို့ပင်အရပ်တို့ကိုကန့်သတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့သင်တန်းပို့ချနှုန်းထက်ပိုမိုစုံတွဲတစ်တွဲကျောင်းသားများကို ယူ. မသွားနိုင် ...
PS: သူများသည်လိုအပ်ချက်များကိုက "အကယ်ဒမီ" မ "စွန်ငှက် Lounge ဟာ" အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်များမှာ
သငျသညျအရည်အချင်းပြည့်မီနေကြသည်ပြီးနောက်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စွန်ငှက် Lounge ဟာနည်းပြဖြစ်လာ ...
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူဖြုန်းအချိန်ကိုကတခြားအသစ်သောနေရဆဲဖို့သင့်ထံမှပြန်လည်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကအခြေခံအားဖြင့်, ဒီအသိုင်းအဝိုင်းသာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သိသာစုံလင်ခြင်းရှိရန်သင့်အားမမေးကြဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ကယူသင်တန်းနှင့်အတူပတ်သတ်ပြီး, သငျအသစ်များကိုနေရဆဲဖို့သင်ပေးလို့ရပါတယ်တစ်ခုခုရှိရလိမ့်မည်။
ဤသည်မှာပြီးခဲ့သည့်ကတိကဝတ် (N ကို4°) သော့ချက်, ဒီအသိုင်းအဝိုင်းကမပါဘဲအလုပ်လုပ်လို့မရဘူး ...
ကောင်းပြီ, ရိုးသားဖို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးစွန်ငှက်ရှေ့ပြေးရဲ့အသက်ရှည်သမျှရှုထောင့်ကိုဖုံးလွှမ်းမည်မဟုတ်ပေမယ့်အကြှနျုပျတို့သညျမစ်ရှင်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ဖို့လုံလောက်တဲ့သင်ယူပါလိမ့်မယ်သည်ဟုစဉ်းစားပါ ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန်ငှက် BMS "လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းကအစီအစဉ်ကို" Check စာမျက်နှာနှင့်သင်တစ်ဦးချင်းစီသည်သင်ခန်းစာများ၏ content ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျနောက်ကွယ်ကသီအိုရီပြင်ဆင်ထားရန်အဘို့ဤ website တွင်တစ်ခုချင်းစီကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုလမ်းညွှန်ထားရှိရေးပါလိမ့်မယ်။
ကိုသတိရပါ: ငါတို့သည်သင်တို့၏အသိပညာနှင့် complementing မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဘက်မှအလုပ်မပါရှိပါလျှင်, သင်ယခုအချိန်အထိမရကြလိမ့်မည် ...
တစ်ခုချင်းစီကိုသင်ခန်းစာရဲ့အဆုံးမှာနည်းပြဆရာသင်သည်သင်၏တိုးတက်မှု, အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုတစ်ခြေရာခံခြင်းပေးရန်ဖိုရမ်များအပေါ်တစ်ဦး debrief post ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီရိုးရိုးသားသား, ဘာမျှမ ... ကျနော်တို့ကတဆင့်သွားပါနှင့်သူတို့သင်ခန်းစာများနှင့်သင်တန်းများနောက်ကွယ်မှဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လိုအပ်ချက်နားလည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးစိစစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းပို့ချကနေမလိုအပ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာနည်းပြဆရာသင်နှင့်အခမဲ့ကူညီအားမိမိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချိန်ကိုငါပေးမည်ဖြစ်ပါသည် !!! ကိုယ့်အဘို့, အဲဒီပြီးသားအလုံအလောက်ပဲ!
ဒီ Simulator ကိုနှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါသည်, သတိရပါ။ (ကျွန်တော်, ထို့နောက်သင်နှင့်အတူပျံသန်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီးကြပါလျှင် !!!) ကြှနျုပျတို့သ ... သင်ကထဲကကိုမှန်ကန်တိုက်လေယာဉ်မှူးလုပ်မည်မဟုတ်
ကောင်းပြီ, ထိုလွယ်ကူပါတယ်! ယင်းစိတ်တိုးပွားရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့် MaxWaldorf သို့မဟုတ် Ripper ဆက်သွယ်ပြီးသင်တို့သည်ငါတို့၏လေ့ကျင့်ရေးဝိညာဉ်နှင့်အတူသဟဇာတဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့အကဲဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျံသန်းမှုကျောင်းရှောက်လျှင်၎င်းဝန်ထမ်းသင် (သင့်အဆင့်အထိပေါ် မူတည်. ) အချို့သောသင်တန်းများသင်ပေးနိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏စိတ်ဝင်စားထင်လျှင်ဒါ, ပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားရ! သင်ရုံတစျခုခြေလှမ်းကွာပျော်စရာများနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ကမ္ဘာမှများမှာ!
အောက်ကလင့်ခ်ကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်သင်္ဘော & ကံကောင်းပါစေ Gentelmen ကြိုဆိုပါ၏!
အဆိုပါစွန်ငှက် Lounge မှကြိုဆိုပါ၏!
ချစ်ခင်ရပါသောကြည့်ရှုသူ "ဟု The စွန်ငှက် Lounge ဟာ" မှကြိုဆိုပါ၏! ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းစွန်ငှက် BMS simulator.You အပေါ်အခြေခံသည်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူ chat နိုင်ပါလိမ့်အသစ်ကမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ, အရေးအကြီးဆုံးကတော့အသစ်သောအရာ (အကယ်ဒမီမှတဆင့်သို့မဟုတ်မ) နှင့်သင်ယူပါလိမ့်မယ်: F-16 ပျံပျော်မွေ့ join ပါ အခုငါတို့နှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တိုးပွား channel မှာမကြာမီသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဖို့တခြားကို virtual pilots.Hope နှင့်အတူအချို့သောကောင်းသောအချိန်ဖြုန်း ...